Top 20 Android Bluetooth Games na Multiplayer mode
1 Top Android Games ime ụlọ
1.1 Top-atụ aro Android Games ime ụlọ
2 Top Android Games Download Ebe
2.1 Fantastic Android Game Download Ebe I Kwesịrị Ịmara
2.2 Android Games APK-Olee otú Download Free Android Games Full Version
Ma gụọ 2.3 Top 10 Recomended Android Games on Mobile9
3 Top controllers maka Android Games
3.1 controllers n'ihi na gị Smartphone - Best Android Game njikwa
4 Top Android Games Nsuso
4.1 Best 20 New ugwo Android Games Ị ga na-agbalị
4.2 Top 20 Android Racing Games I Kwesịrị Gbalịa
4.3 Best 20 Android na-alụ ọgụ Games
4.4 Top 20 Android Bluetooth Games na Multiplayer Mode
4.5 Best 20 Adventure Games maka Android
4.6 Top Free Online Android Games mkpa ka ị mara
4.7 Best Android Games na 2015
4.8 Top 10 3D Android Games Worth ebre
4.9 Top 20 Android Games maka Kids na 2015 ga-eme ka Ha Smile
4,10 Top 10 Pokemon Games maka Android
4.11 Top Awesome Android Games Ị Mkpa Iji na-agbalị
4.12 Top 15 Fun Android Games igwu egwu na Enyi
4.13 Top 10 Football Games maka Android Ọrụ
4.14 Top 10 Games maka Android Tablet
4.15 Top 10 Puzzle Games maka Android
4,16 Top Games on Android 2.3 / 2.2
4,17 Best Zoro Ezo Object Games maka Android
4,18 Top 10 Best Android Hack Games
4,19 Top 10 Kaadị Games maka Android
4,20 Top 10 HD Games maka Android na 2015
4,21 The World si Best Okenye Android Games I Kwesịrị Ịmara
4,22 The World si Best agbapụ Games maka Android na I Kwesịrị Ịmara
4,24 Top 50 Android Action Games
4,26 Top 50 Android RPG Games
Ụfọdụ ndị na-achọ ọtụtụ edinam na ike-ewere ọnọdụ na n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla na-enweghị-kegide ala nye ihe internet jikọọ. Iji Bluetooth technology, ọtụtụ Android egwuregwu na-achọ ịnapụta nnọọ na, elu àgwà egwuregwu ọtụtụ na ike ga-egwuri gafee Bluetooth na gị ozu na a ụlọ. Ma e nwere ọtụtụ Android Bluetooth egwuregwu, na dị ka nke a technology na-arị ọzọ na-ewu ewu, egwuregwu ná mgbanwe nke degrees nke àgwà ẹyọyọhọ na idei mmiri ahịa. Ugbu a, a maara ihe n'ji adịghị nnọọ ogbenye ego enweghị isi n'ime usoro maka egwuregwu na-adịghị ọbụna gbalịrị, nke a emewo ka ọtụtụ ndị egwuregwu ịmafe ha azụmahịa ụdị si na-akwụ na-play ka Micro-azụmahịa ma ọ bụ free-sikwa egwu egwuregwu na na-ngwa ịzụrụ. M na-eme mgbalị ọ bụla ikewapụ abụọ ndị azụmahịa ụdị ebe a. Kama m elekwasị anya na nke kacha mma Android Multiplayer egwu na Bluetooth atụmatụ dabeere nanị na ọdịnaya nke egwuregwu.
1. Minecraft: n'akpa uwe mgbakwunye
Ahịa: $ 6.99
Minecraft bụ otu n'ime ndị kasị mma-ere egwuregwu niile oge. Nke a bụ egwuregwu ọṅụ na-egwu dị ka otu nke kasị mma Android Bluetooth egwuregwu, na nke ukwuu nnwere onwe na-egwu Otú ọ dị ị chọrọ. Team elu? Ji n'Aka! Ebibi onye ọ bụla ọzọ? Ka anyị mee ya! Nke a bụ maa m niile na-oge mmasị egwuregwu. Akwụ $ 6.99 na-enwe adịghị agwụ agwụ fun!
2. Counter Srike: Portable
Counter Ebu kemgbe a hit na PC ahịa n'ihi na ezi oge ụfọdụ. Ma nke a mgbakwunye na franchise nanị na-agbakwụnye nkụ ka ọkụ nke onye na-aga nke ọma Ịgba Cha Cha Hapụrụ. Nke a Android Bluetooth egwuregwu na-eweta egwu oge ịse-em-elu atụmatụ ka mobile ahịa na ike mfe fun na ndị enyi ma ọ bụ ọbụna online iro!
Nke ahụ ziri ezi, cheesi mere ka ọ elu na nke a ndepụta. Nke a bụ n'ụzọ bụ isi n'ihi cheesi bụ a zuru okè egwuregwu ahu nagide Android Bluetooth technology ime ka otù onye nke ụwa kasị ochie egwuregwu legacies ka ọhụrụ afọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-amasị atụmatụ egwuregwu ọ na-enyere aka mara onwe gị na ihe ndị kasị stratejik egwuregwu na ahịa!
4. Asphalt 7: Okpomọkụ
Ọduọ egwuregwu idei mmiri na Android Bluetooth egwuregwu ahịa, ma dabara nke ọma e nwere ọtụtụ nke n'ezie ezi omume. Ọ bụrụ na ị chọrọ elu-octane racing ndị mara mma na ugbo ala na mma na ọtụtụ nhọrọ maka optimizing gị wiil, lelee Asphalt 7. Na ee, Asphalt 8 bụ, ma ruo mgbe ha gburugburu na egwuregwu, Asphalt 7 anọgide ọkacha mmasị m.
5. efu Kombat X
N'eziokwu, mgbe ụfọdụ, ị dị nnọọ mkpa bludgeon onye n'ime a meaty pulp. Efu Kombat emewo ka ha na-ewu ewu franchise ka mobile ahịa na nnukwu ịga nke ọma. Nke a bụ egwuregwu zuru okè n'ihi na ọdụ site na otu enyi na itikasị ọ bụla ọzọ na ọnwụ n'elu Bluetooth netwọk.
6. Oge a na mbuso 3: dara Nation
Oge a na mbuso-abịa si na egwuregwu mara mma ngwa ngwa. Nke a version n'ezie rapaara na m, Otú ọ dị. Gameplay ọma bụla na upgrades ndị ọzọ na-apụtakarị iji nweta aga na free ụzọ mgbe ndị ọzọ egwuregwu n'ezie gouge ị n'ime-eme ka ndị na-eji ngwa zụọ. Fun ịke na ezi ruo ogologo awa nke fun.
Kwụsị ugbu a ma na-agbalị egwuregwu a. Naanị mee ya. Ị adịghị mkpa ama ihe ọ bụla banyere ya. Ọ bụ free na-agbalị na ị ga-ekele m mgbe e mesịrị. Nke a bụ egwuregwu m adịghị nkịtị ịke nke egwuregwu ma o nwere m risịrị!
Ee, abụ m a basketball akwado, ma na-ewepụta, ọ bụ n'ezie ike ịhụ ihe ọ bụla ezigbo egwuregwu egwuregwu na mobile ahịa, ka naanị ndị Android Bluetooth egwuregwu ahịa. Ma NBA Jam wee site na a n'ezie oké egwuregwu. Graphics dị nnọọ mma maka a mobile ahịa na gameplay bụ karịa playable na ekwentị mkpanaaka. Ọ bụrụ na ị na-amasị basketball na niile, nke a bụ ụzọ na-aga n'ihi na mobile ahịa.
9. New 3
Nke a bụ otu n'ime mma egwuregwu na Android Bluetooth egwuregwu ahịa. Ọ bụ a ohere shooter na n'ezie ịrịba gameplay na ndịna-emeputa. The ozi ịke bụ seemless na ị pụrụ n'ezie ida track oge na onye a!
M n'ezie mmasị 2011 na m chere na 2012 capitalized na ịga nke ọma nke na ọ na ada akwa egwuregwu. The gameplay dị mfe nna na-emeputa bụ zuru okè n'ihi na ahịa. Ị nwere ike iji na-agbalị na 2013 version, ma m ga-agba gị ume na-agbalị a onye mbụ, ị ga-ahụ 2013 na-efu ndị kensinammuo na enweghị nkebi gameplay nke ya ụzọ.
M enweghị echiche ihe snooker bụ ruo mgbe egwuregwu a. Ọ bụrụ na ị na-enweghị echiche ma, ibudata ya Ko na-agbalị ya. Ọ bụ n'ụzọ dị ịrịba ama atọ ụtọ, karịsịa na enyi.
The Android Bluetooth egwuregwu ahịa kwesịrị egwuregwu dị ka nke a. Dị nnọọ raw, rụsiri fun. Ọ bụ fun na dịruru. A otutu ọgụ egwuregwu nwere ike ida ha luster mgbe a ole na ole ọkụ, ma nke a egwuregwu, ya siri ike njikarịcha nchịkọta, na-eme ka ọtụtụ awa fun solo ma ọ bụ na ndị enyi mfe ime.
13. Worms 2: Amagedọn
Agaghị m ekwu otú ndị agadi m, ma nke a egwuregwu na-eweta azụ ụtọ echeta. Gịnị mere ndị a ikpuru chọrọ igbu onye ọ bụla ọzọ? Onye ma? Ma m hụrụ ya n'anya! N'ihi na, m ga-egwu egwuregwu a na enyi. E bụ n'ezie ukwuu solo fun na ya maka m. Ma na pụrụ ịbụ nostalgia nke ya.
14. nanị nde
Mmada ụfọdụ ogologo flights na aba ụzọ njem na ọtụtụ ndị na-abụghị nnukwu gamers. Nke a bụ zuru okè n'ihi na ndị ọnọdụ. Nanị bụ n'ezie a egwuregwu n'ihi na onye ọ bụla. Ekwela ka ala akara ghọgbuo gị, egwuregwu a bụ zuru okè maka Android Bluetooth ahịa ebe dị ka ọ na-arịọ ka a dị ukwuu nabatara umu-ege ntị.
15. gt Racing 2: The Real Car Ahụmahụ
Ee, ọzọ racing egwuregwu. Ma onye a na-elekwasị anya a bit ọzọ na nkwafu na-agba ịnyịnya ya. Racing, n'ezie, bụ nnukwu ihe na-akpata. Ma n'ezie optimizing gị ụgbọala maka ụzọ na oyi Tweaks na ogologo anụ upgrades bụ ihe egwuregwu a bụ ihe niile banyere. M hụrụ n'anya na jikọọ na ndị enyi m na-ahụ otú m nkwafu na-agba ịnyịnya fairs megide ya.
Ị maara, M nnukwu ozi ụdị Ihọd na m hụrụ n'anya na-enwe ike ngalaba-op na m buddies na-eme ka ihe na-eme. Nke a bụ otu nke egwuregwu ndị ebe gị buddies nwere ike na-arụ ọrụ gi na na-ebe a larịị na-adịghị-agbapụ na gị!
Ọdọ mmiri dị ka ogologo oge kemgbe otu n'ime ndị kasị marketable egwuregwu ọtụtụ mmadụ. Egwuregwu a n'ezie bụ zuru okè maka Android Bluetooth ahịa dị ka ị nwere ike igwu ụfọdụ ngwa ngwa egwuregwu tupu nzukọ na onye ọrụ ibe, ma ọ bụ nkechi ala maka ndorondoro na ọtụtụ buddies.
N'adịghị ka efu Kombat si n'elu, Tekken n'ezie na-elekwasị anya agwa di iche iche na a myriad nke pụrụ iche na-alụ ọgụ gameplay. -Amasị m Tekken maka jụụ Nkea na oké odide. My enyi prefers egwuregwu a n'elu efu Kombat, ma, hoo haa, m ụtọ nke ha abua.
Bọọlụ na mgbidi fun na egwuregwu a. Ọ bụ edinam juru n'ọnụ na ngwa ngwa paced. Ọ bụ otu nke egwuregwu ndị ebe ị ga iti mkpu na mkpu na-achị ọchị na ndị enyi gị n'ụzọ nkịtị n'otu oge na na otu ume.
20. checkers J.Randall
Checkers bụ checkers; ma ọ bụrụ na ị na-amaghị otú e si akpọ mgbe ahụ ị ga-amụta na ọ na nkeji abụọ. Na-awụlikwa elu ha iberibe, ịzọpụta gị onwe gị na-esi n'akụkụ nke ọzọ. Ikpeazụ guzo Enwee Mmeri! Checkers bụkwa ihe ọma Android Bluetooth egwuregwu iji zuru ike na. Ọ bụghị ọtụtụ mgbalị ma ụdị fun na vegging si mkpa.
Olee otú mirror Your Android ihuenyo ka PC na Chromecast
Olee otú mirror ihe ọ bụla si PC ka TV
Fantastic Android Game nbudata Ebe I Kwesịrị Ịmara
Best 20 New ugwo Android Games Ị ga na-agbalị
The World si Best agbapụ Games maka Android na I Kwesịrị Ịmara
Top 10 HD Games maka Android na 2015
Top 10 3D Android Games Worth ebre
> Resource> emulator> Top 20 Android Bluetooth Games na Multiplayer mode